Dawlada Somaliya oo dalalka carbeed ka codsatay Ciidamo nabad ilaalin ah | maakhir.com
Dawlada Somaliya oo dalalka carbeed ka codsatay Ciidamo nabad ilaalin ah
Muqdisho:- Dawlada Somaliya ayaa ka dalbatay Wadamada Carabta in la soo gaadhaan ciidamo kuwaasi oo ka qayb qaata Soo celinta nabada Dalka Somaliya, Wasiiraka arimaha dibada ee Dawlada Somaliya Xuseen Ceelaab Faahiya ayaa sheegay in Dawlada ha carabta looga fadhiyo inay ciidamo ku soo biiriyaan Dalka Somaliya kuwaasi oo xoojin doona kuwa haadan jooga Gudaha Dalka ee ka socda Midawga Afrika.
Xuuseen Ceelaab oo dhawaan gaadhay Dalka Masar caasimadiisa ee Qaahira ayaa waxa uu kulan dheer la qaatay Xooghaya ha Guud ee Jaamacada Carabta Caamir Muusaa iyaga oo aad uga wada hadalay inay haboon tahay in ciidamo ka socda Dalalka carabta la keeno gudaha Somaliya si ay meesha uga saaran kooxa ay Dawlada Hawsheeda ka dhaqaajin kari wayday.
Mr Faahiye ayaa ugu baaqay wadamada carbeed inay taageera ciidan isla garab taagaan Dalka Somaliya ee ay Dagaaladu aafeeyeen,isaga oo sheegay inay ciidamada Itoobiya meesha banaynayaan goorta la helo ciidamo bedala oo nabada Caasimada si caadi ah ku soo cesha, waxa uu sheegay inay dhawaan caasimada soo gaadheen ciidamo hordhaca ah oo ka socda Midawga Afrika kuwaasi oo ay ku yaboohday Dawlada Uganda.
Waxa uu walaac xoogan ka muujiyay dibu dhac ku yimi ciidamadii ay qoondeeyeen Midawga Afrika kuwaasi oo lagu soo daad gurayn lahaa Dalka Somaliya,isaga oo intaasi raaciyay inay ciidamadaasi aan Dalka Somaliya soo gaadhin ilaa haatan loogana fadhiyo Midawga Afrika inay la soo gaadhaan ciidamadaasi si loo xaka meeyo kooxa ah dagaalada ka wada gudaha Caasimada.
Hadalka Ceelaab ayaa ku soo beegmaya xili ay caasimada ka oogan yihiin dagaalo kulul kuwaasi oo u dhexeeya Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Somaliya isku xulufa ah iyo kooxa ah ka soo horjeeda Dawlada Somaliya, iyada oo ay keeneen khasaare lixaadleh iyo Barakac joogta ah.
« Weerar lagu qaaday Saldhig ciidan ee ay leeyihiin ciidamada Itoobiya ee jooga Muqdisho
Ciidamada ka hawl gala Saldhiga Degamada B/wayne oo joojiyay shaqadii ay halkaasi ka hayeen »